Kabala SanduuqaMeeshaa bana.
Haalata gulaaluu keessaatti qaqaa amalaa banuf too'annaa irra lama cuqaasi.
Haalata gulaaluu keessaatti too'annaa irra mirga-cuqaasuun ajajaa muri, garagalchiif maxaansi akkasuuma filu nidandeesa.
Qabduu ajajaa ida'a. qabduu ajajaa akka hiika mudata jechuun kan akka cuqaasa hantuuttee raawwatuu akka sifayyadamuu nidandeesa.
Yoo barbaade, qabduutti barruu yk saxaatoo ida'uu nidandeesa
Too'annoo isa saxaatoo mul'isu ida'a.
Saanduqa dhugoomsii kan faankishinii kaasii ykn dhaamsii deebisuuf fayyadamuu dandeessu ida'a.
Asxaalee barruu agarsiisuuf dirree ida'a. Asxaaleen kun barruu duraan ibsame agarsiisuuf qofa, barruu saaguufii mit.
Sanduuqa naqa iddoo itti barruu galchuuf gulaaluu dandeesuu ida'a.
Sanduuqa iddoo glfata tarree irraa itti cuqaasuu dandeesuu ida'a.
Saanduqa makaa ida'a. Saanduqni makaan saanduqa tarree sarara tokkoo kan fayyadamaan cuqaasuu danda'uu, fi achiin tarree irraa galfata fili. Yoo barbaadde, galfatoota saanduqa makaa "dubbisuu qofa" keessa godhuu dandeessa.
KabalaMarfata sardalaa qaqaatti ida'a.
KabalaMarfata Sarjaa qaqaatti ida'a.
Godayyaa too'annoota walfakkaatan ilaalaa qooduuf kan fayyadamuu dandeessu ida'a, kan akka qabdoota filannoo.
Qabdoota filannoo garoota adda addaa lama qindeessuuf, kasaan caancala kan godayyaa garee kasoota caancalaa garoota lamaanii gidduu ta'uu isaa dhugoomsi.
Agarsistuu guddinaa qaqaatti ida'a.
Sarara Surdala qaqaatti ida'a.
Sarara sarjaa qaqaatti ida'a.
Dirree guyyaa ida'a.
Yoo amala "gadbuusa" dirree guuyyaaf ramadde, fayyadamaan guyyaa filuuf dhahaa gadbuusuu danda'a.
Dirree sa'aatii ida'a.
Dirree Lakkofsaa ida'a.
Dirree mahaallaqa ida'a.
Saanduqa barruu iddoo barruuf dhangeessuu naqame ykn bahame akkasumas akka gatoolee daangessaa kamuu qindeessuu dandeessu ida'a.
Dirree haguuggame ida'a. Dirreen haguuggame haguuggee naqamaa fi haguuggee cooka hin taane qabata. Haguuggeen naqamaa deetaa fayyadamaa kam akka saagamu murteessa. Haguuggeen cooka hin taane haala dirree haguuggame yommuu unki fe'amu murteessa.
Qabduu isa qaqaa filannoo faayilii banu ida'a.
Haalata filannoo kakaasa ykn hin kakaasu. Haalata kana keessatti, too'annoota qaaqa keessatti filachuu dandeessa kanaaf isaan gulaaluu dandeessa.
Qaaqa iddoo amaloota too'annoo filataamanii itti gulaaluu dandeessuu siifbana.
Haalata Basdaduu Kakaasi
Haalata yaalii jalqaba. Haalata yaalii xumuruuf sajoo cufaa qaaqaa cuqaasi.
bana qaaqa dandeessisuuf ykn qindaa'ota hedduu maddoota qaaqaa afaanotaa hedduuf taliiguu.
Too'annaa damee kan tarree sadarkaa agarsiisuu danda'u ida'a. Tarree sagantaa keetiin dilormessuu dandeessa, waamicha API fayyadamuun (Too'annaadameeX).
Title is: Too'annoota Saagi